Culimo Jawlo dacwadeed ku soo maray magaalada Bursaalax ee degmada Galdogob [Masawiro]
Bursaalax:-Culumada iyo ducaada Mu,assasada Alminhaj ee degmada Galdogob ayaa dhawaan jowlo dacwo waxaa ay ku soo maray qaybo k amid ah deegaanada hoos yimaada degmada Galdogob ee Gobolka Mudug. Ducaada oo uu wehliyey hormuudka jaamcada bariga Afrika fareceeda Galdogob ayaa subaxnimadii khamiista ka anbabaxay magaalada Galdogob ee Gobolka Mudug ugu horayna waxay ku hakadeen tuulada Qansaxle oo 18km u jirta magaalada.
Dadka deegaanka ayaa aad u soo dhaweeyey ducaada iyagoo dhamaan ay iskugu yimaadeen goobihii ay ducaadu duruusta ka jeedinayeen oo ahayd bartamaha tuulada, culumaduna waxay kala hadleen in ay Allaah ugu shukriyaan nimcada roobka kana fogaadaan munkaraadka iyo dunuubta xiliga barwaaqada ah dadku sameeyaan, waxay kale oo kala hadleen in dadka wax la baro lagana fogaado dhaqanada xunxun oo ay ugu horayso tubaakada iyo qaadka IWM.
Kalmadii culumada ka dib ayaa hadalkii waxaa qaatay odayaashii deegaanka waxayna aad u soo dhaweeyeen culumada iyo ducaada jowlada ugu timid ayagoo codsaday in loo sii wado jowlooyinkaan dacawiga ah.
Sidoo kale waxay culumadu ku hakadeen deegaanka Jeexo inkastoo ay Qansaxle ka dad yarayd haddana aan ka wacdaro yarayn, ka dibna duhurnimadii ayey culumadu gaareen magaalada Bursaalax oo runtii ah magaalo casri ah kana mid ah magaalooyinka degmada ugu muhiimsan , horumar badana ku tilaabsatay xag waxbarasho, biyogalin, dhisme IWM.
Waxaa ducaada halkaas soo dhaweyn diiran ugu sameeyey culumada deegaanka oo ugu horeeyo Sheekh Muuse Yuusuf Xaaji ,Inkastoo masjidkii jaamaca ahaa dhisme ku socday haddana culumadu waxay bacdal casar kasoo jeediyeen kalmad masjidka Salaama oo ku yaal bartamaha magaalada, ka dibna culumadii iyo jamaacadii masjidkuba waxay usoo dareereen bartamaha magaalada oo lagu sameeyey dacwo shaaric balaaran, halka bacdal maqribna isla masjidkii laga soo jeediyey muxaadaro ka hadlaysay fadliga cilmiga.
Waxaa kale oo culumadu sameeyeen booqashooyin ay ku sameeyeen goobaha kala duwan ee waxbarashada gaar ahaan koleejka wayn ee bursaalax iyo dugsiga H/Dhexe ee Cirro, halka habeenimadeena ay kalmad dumarka loogu talo galay ka jeediyeen idaacada Alxikma ee Bursaalax.
Bacdal cishaaigii ayaa la isugu yimid kulan balaaran oo ay kasoo qayb galeen ducaada iyo culumada iyo maamulayaasha goobaha waxbarashada qaybo ka mid ah, kulankaas oo la isku dhaafsaday talooyin muhiim ah ayaa ku soo gabagaboobay jawi farxadeed iyo is fahan.
Mu,assasada ayaa qorshaynaysa safar labaad oo ay ku aado deegaanada dhiman ee degmada sida Xerojaalle, isqanbuus, Riigoomane, Daarasalaam, IWM.
Xoghaynta warbaahinta ee